WICShopper သင်အသုံးပြုဘို့ WIC လွယ်ကူသောစေမည်ကြောင်း tools တွေကိုပေးပါသည်။ အားလုံးအေဂျင်စီများထောက်ခံဒါတူညီသောစွမ်းရည်ရှိနေကြသည်မဟုတ် app ကိုစတိုးဆိုင်များတွင်ဖော်ပြချက်ဖတ်ပါရန်သေချာစေပါ!
ကျေးဇူးပြု! သေချာသည်သင်၏အေဂျင်စီ app ကို install မလုပ်ခင်ထောက်ခံနေသည်ဖြစ်စေ app ကို store မှာဖော်ပြချက် Read! မဖွင့်လျှင်, သင်မှာကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့နိုင်ပါတယ် WICShopper@jpma.com လျှင်အခါသင့်ရဲ့အေဂျင်စီထောက်ခံပါလိမ့်မည်ထွက်ရှာရန်။
မက်ဆာချူးဆက်, ဖလော်ရီဒါ, အိုင်အိုဝါ, ကီ, ဒဗလျူဗာဂျီးနီးယားတက္ကဆက်ပြည်နယ်, နယူးမက္ကစီကိုနှင့် Wyoming: WICShopper အောက်ပါပြည်နယ်များအတွက် WIC အစီအစဉ်များကိုထောက်ပံ့
သင့်ရဲ့ WIC EBT ကဒ်၏မျက်နှာစာပေါ် 16 ဂဏန်းအရေအတွက်အားသုံးပြီး Register ။ မှတ်ပုံတင်ခြင်း TX, မိုင်, WY သို့မဟုတ် OH အတွက်မဖြစ်နိုင်ပါ။
သင်သည်သင်၏, သင့်ကဒ်မှတ်ပုံတင်ပြီးတာနဲ့ ယခု အကျိုးခံစားခွင့်ကိုအလိုအလျောက် app ကိုမှဒေါင်းလုတ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ TX, WY နှင့်မိုင်ဝမ်းနည်းပါတယ်, ဒီကသင်၏ပြည်နယ်များရှိသေးမဖြစ်နိုင်ပါပါ!
သငျသညျ WIC ထိုက်ခွင့်ကိုအတည်ပြုရန်စျေးဝယ်အဖြစ်ထုတ်ကုန် scan လုပ်ပါ။ က WIC အရည်အချင်းပြည့်မီပါကအားလုံးပြည်နယ်များမှာတော့ app ကိုသင်ပြောပြလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးများကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ခဲ့ကြပါလျှင်ပစ္စည်းသင်၏ကျန်နေသောအကြိုးခံစားခှငျ့မြားနှငျ့သင်အဘို့အရည်အချင်းပြည့်မီလျှင် App ကိုသင်ပြောပြလိမ့်မယ်။
Arkansas ပြည်နယ် WIC
Choctaw အဘိဓါန် WIC
JPMA 12 နှစ်ကျော်များအတွက် WIC အစီအစဉ်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည်။ မှ ကျန်းမာရေးနှင့် WIC ဆေးခန်းများတွင်သို့မဟုတ်မိုဘိုင်းကိရိယာများအပေါ်အာဟာရပညာရေး စူပါမားကက်ကုန်ပစ္စည်းမှကျနော်တို့ WIC အစီအစဉ်တွင်အားလုံးသက်ဆိုင်သူများများအတွက်ရည်မှန်းချက်များတိုးကြောင်းဆန်းသစ်ဖြေရှင်းချက်ပေးကြိုးစားကြသည်။